TTSweet: ထြီဂို နော်မထြီလေး တစ်ပုဒ်
Posted by T T Sweet at 9:17 PM
Rita June 14, 2010 at 11:06 PM
မြတ်နိုး June 14, 2010 at 11:34 PM
အမ..ဟုတ်တယ်..ကျနော်က chemistry ၃မှတ်ပြုတ်ပဲ..
ဒါပေမဲ့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရတာ အခုတော့ ဂုဏ်ယူတတ်နေပါပီ.
အခုလဲတူမက ၁ဘာသာထဲပါလို့ ပုလဲတွေခနေသတဲ့..။
ဂျူနို June 14, 2010 at 11:57 PM
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း ထွက်တိုင်း ဒီဖီလင်က အသစ်ဖြစ်ရတာ။
အိမ်က ညီမလေး အောင်တယ် ကြားလို့ ဒီနေ့ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျတယ်တောင် မဟုတ်ဘူး ငိုမိတယ်။
sonata-cantata June 15, 2010 at 12:13 AM
တီတီဆွိရေ ဘယ်အရာမှာမဆို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့ အခုလိုအချိန်မှာ ငယ်တုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။
သက်ဝေ June 15, 2010 at 1:00 AM
ရေးထားတာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ... ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိဘဝကို ကျေနပ်နေတဲ့ ရေးဟန်တွေ အထင်အရှားနဲ့... ဘဝတွေမှာ အဲဒီအချက် အဲဒီအသိလေးက အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ... ဖတ်ရတာ သိပ်သဘောကျတယ်...။
ကိုယ်ကတော့ ၄ မှတ်အလိုပါ...
သူငယ်ချင်းလိုပဲ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ဖော်ရင်း စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာ အကိုကြီးတစ်ယောက်ဆိုတာတော့ မကြုံဆုံခဲ့ရကြောင်းပါ... ဟဲဟဲ
(ပြောင်ချော်ချော်လေးမှ နဲနဲမပါရရင် မနေနိုင်လို့ပါ...)
SHWE ZIN U June 15, 2010 at 1:56 AM
ရွှေစင်ဦး တို့ကတော့ ၃မှတ်အလိုတော့ ပျင်းတယ် အဟဲ ၁ မှတ်အလို တဲ့ နောက်က ဝဝ နှစ်လုံး ဖြုတ်လိုက်ရင်လေ
တီတီဆွိ ကတော့ ဂျူဂျူ နဲ့ တင်တန်တယ်မဟုတ်လား
စူးနှယျလေး June 15, 2010 at 3:27 AM
အင်း....ပြန်မတွေးလိုတော့ပါ...အဲဒီတုန်းကလည်း သိပ်လည်း ၀မ်းမနည်းတတ်ခဲ့ပါဘူး...
လသာည June 15, 2010 at 8:16 AM
တိုက်ဆိုင်စွာ ပြန်သတိရသွားတယ်.. ညီမတော့ သင်္ချာမဟုတ်ပဲ ဓါတုဗေဒကို ရူပဗေဒကျက်ပြီး သွားဖြေတာ။ တအားမိုက်တယ်ဟုတ်း))
တီတီဆွိရဲ့ ဘ၀အပေါ်ထားတဲ့ အမြင်ကို တအားသဘောကျမိတယ်။ အားကျ အတုယူသွားပါတယ်။
Vista June 15, 2010 at 12:23 PM
ဟဲဟဲ ၃ မှတ်ပြုတ်တွေလာတွေ့ နေပါပကောလား ..
အနော်တို့ ခေတ်ကတော့ ဆေးကျောင်းမိန်းကလေးအမှတ်မြှင့်လိုက်တာမို့..
မရလည်းဝမ်းမနည်းပေါင် လုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရလို့ ။
T T Sweet June 15, 2010 at 3:13 PM
ခုမှသိတော့တယ် .... ကိုယ်လိုဘ၀တူတွေ ဒီထဲမှာ လာစုနေကြပါလားလို့ ... အော် ... ဘ၀တွေ ...
ဒီပို့စ်ရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ၁၀တန်းမှာ ဒီလိုင်းမရလို့ ဘ၀င်္ကြီးတစ်ခုလုံးတော့ သွားပါပြီ ... ရေစုန်မျောပါပြီ ..
လို့ထင်နေကြမဲ့ သူများအတွက် ... ရောက်ရာနေရာမှာ ကျိုးစားဖို့ အခွင့်အလန်းရှိသေးတာပဲ ... ဘ၀ဟာ အဲလောက်ကြီးတော့ မဆိုးပါဘူး ဆိုတာလေး သိစေချင်တာပါ ...
Bino June 15, 2010 at 3:14 PM
၁၀တန်း အောင်စာရင်းနောက်ကွယ်က ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးကြမည့် သူများအားလုံးအတွက်
It had been passed over 36yers.
I missed my ambition after finished exam.( 1974)
My life is totally changed coz off weak in Chemistry.
Actually I'm crazy in Trigo and Geometry.
Some of Algebra problem solved by Geometry.
I like art. I like Maths.(Maths isabeautiful curve)
You may be understand about me or same situation on you.
But I can handle my worst situation after 20 years.
That is not so late.
I altered courseatrack from my desire way to right way.
Presently, My life seem to be okay.
I'masuccessful man in my field. ( compare with my little society only)
ချစ်ကြည်အေး June 15, 2010 at 4:06 PM
စက်မှုမဝင်လို့ အာအိုင်တီကျောင်းဝင်းကြီးထဲ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် သွားငိုခဲ့ကြတာ သတိရသွားတယ်။ ဟုတ်ပ တို့လည်း သချာင်္ပဲ ဆွီရေ...ပေါ့ပြီးနေလိုက်တာ ပုံသေနည်းတွေ မေ့ပြီး ဘာမှ တွက်ချက်မရဖြစ်တာလေ။ သူများတွေ သချာင်္မှာ ၉၀-၁၀၀ ရနေချိန်မှာ တို့က ၅၅ မှတ်နဲ့ ဆိုတော့ အဲဒီမှာ အမှတ်တွေပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီး အီကို ဝင်ခဲ့တာ။ ခုတော့လည်း ဆွိပြောသလို ဘဝကို ကျေနပ်တတ်ခဲ့ပြီ...။ အိမ်ကလူကြီးတောင် သတိရသွား....။ ပြန်ပြီ...။
Thu June 15, 2010 at 6:27 PM
Great U Poe Sein performed “Mg Kar Ka, Me Kar Ka” play wearing with diamond rings.
ရွှေရတုမှတ်တမ်း June 15, 2010 at 11:52 PM
ကိုပေါ June 16, 2010 at 10:04 AM
ပို့စ်ထဲက မိန်းကလေးနဲ့တကွ အပေါ်က ဆေးပြုတ်များကို ကိုပေါက သနားဂရုဏာ သက်မိပါတယ်။
ကျနော်ကိုပေါမှာတော့ အမှတ်တွေ တပုံကြီး ပိုနေပါတယ်။ ဒီလိုပါ...
ကျနော့်မှာတော့လေ (ဝင်းဦးသံဖြင့်).... ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ဇွတ်အတင်းပို့မှာစိုးလို့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲမှာ ဘာသာရပ်တိုင်း ဖြေနိုင်ပါလျက်ကယ်နဲ့ (ပို၍ ရင်ထုမနာသံဖြင့်)တချို့အပုဒ်တွေကို မဖြေဘဲ တမင်ကလာ ချန်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်စောင့်နတ်သာလျှင် သိပါတယ်........လို့ ပြောရင် မုသားပြောသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ အမှန်အတိုင်းပဲ ပြောပါတော့မယ်။
ဖြစ်ချင်တာက ဗိုလ်လောင်း၊ တက်ရတာက စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆိုတော့ မူလ ရည်မှန်းချက်က လိုအပ်တဲ့ အမှတ်ထက် အများကြီး ပိုသာနေတယ်လို့ ပြောချင်တာပဲ။ ဟိုလိုင်းက အောင်ရင် ရပြီလေ.... ဟဲဟဲ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကျေးဇူးကြောင့် ရည်မှန်းချက် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတယ်။
မဟုတ်ရင် ပျဉ်းမနားနယ်တရိုးမှာ ဗျောက်ကို ခါးကြားထိုးပြီး တစုံတယောက်ကို ဖင်ဗူးတောင်းထောင်အောင် ရှိခိုးနေရမယ် ထင်ပါရဲ့။
စက်မှုတက္ကသိုလ်တက်တယ်။ R & D မှာလုပ်တယ်။ ကျောင်းတုန်းက အစ်မကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်။း-) သမီးလေးတယောက်ရတယ်။ ဘလော့ဂါ လုပ်နေတယ်။ ဒါပါပဲ။
မိုးခါး June 17, 2010 at 11:47 PM
ညီမကတော့ ဆရာဝန်လုပ်ဖို့ စိတ်ကို မကူးခဲ့တာ .. ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိလို့ .. :P
၃မှတ်တည်းနဲ့ ကပ်ပြုတ်တယ်ဆိုတော့ တော်လိုက်တာ ..း)